May 22, 2020 974
बाँकेका २१ जनाले कोरो’नालाई पराजित गरेर शुक्रवार दिउँसो घर फर्किएका छन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका’स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पता’लमा उपचारत उनिहरुको लगातार दोस्रो रिपोर्ट पनि नगेटिभ आएपछि आज उनिहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको हो । एकै पटक यति धेरै संख्यामा कोरोना संक्र’मित निको भएको यो पहि’लो पटक हो ।
डिस्चार्ज हुनेहरुमा ७ वर्षिय बालिका’देखि ६० वर्षका पहिलो संक्रमित समेत रहेका छन् । कोरोनालाई पराजित गर्ने २१ जनालाई अस्पतालको हाता भित्र भेरी अस्पता’लका प्रमुख डा। प्रकाश थापा लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुले फुलको गुच्छा दिएर वि’दाई गरे ।
सो अवसरमा उनले अझैपनि केही दिन घरमा गएर एकान्तवासनै बस्न सल्लाह सुझाव दिंदै लकडाउनको पालना गर्न आ’ग्रह गरे । अस्पतालको गेटमा नेपालगञ्ज उपम’हानगरका उपप्र’मुख उमा थापामगरले निको भएका सबैलाई स्वागत सम्मान गर्दै सानो समयमै कोरोनालाई पराजित गर्न सफल भएकोमा बधाई दिइन् । देशमै पहिलोप’टक एकै पटक ठूलो संख्यामा को’रोना भाइरस पोजेटिभ निको भएर घर फर्किएका हुन् ।
अस्पतालमा रहेका नेपाल’गञ्जका २५ जना मध्ये ३ जनाको रिपोर्ट पोजेभिटनै आएको र एकजनाको समय नपुगेकोले ४ जना अझै एक साता अस्पता’लमा रहने र त्यसपछि परि’क्षण गरेर नगेटिभ आएमा घर पठाइने अस्पतालले जनाएको छ । सो अस्पतालमा नेपालग’ञ्जका चार सहित अन्य सात जना उप’चाररत छन् ।
त्यस्तै बाँकेमा बिहीबार सङ्क्रमण देखिएका दुई जना पनि एकहप्ता अघि भारतबाट आएका थिए । त्यस्तै कोरोना भा’इरसको सङ्क्रमण आज ३० जनामा देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्र’वक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय जनस्वा’स्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र भरतपुर अस्पताल चितवनमा परीक्षणका क्रममा नवलपरासी, चितवन, कपिलवस्तु र सर्लाहीमा सङ्क्रमण भेटिएको बताए ।
नवलपरा’सी (वर्दघाट सुस्तापूर्व) का विनय त्रि’वेणी गाउँपालिका–६ निवासी ४५ वर्षीय पुरुष, चितवन, भरतपुर महानगरपालिका–६ केशरबाघका ८४ वर्षीय पुरुष र ७३ वर्षीय म’हिला छन् ।
Prevआज एकैदिन थपिए ५० कोरोना संक्रमित , कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्
Nextप्रहरी बनेर ‘१२ लाख चोरेको कुरा के हो ? सोनीका जी’ भन्दै फोन गरेपछि..(भिडियोसहित)
हाँस्य कलाकार शम्भुराज थापाको दुःखद निध`न
भाइटीकाको साइत सार्वजनिक, कति बजे हो त उत्तम साईत ? थाहा पाउनुहोस्
विदेशमा रहेका नेपाली फर्कन थाले, म्यानमार बाट २६ नेपाली आए (भिडियोसहित)